Chọpụta ihe anyị nwere ike ịhụ na obodo Scottish nke Glasgow | Bezzia
Ihe ị ga-ahụ na Glasgow
Susana Garcia | 21/04/2021 10:00 | si ebi ndụ, njem
La obodo Glasgow bụ ọdụ ụgbọ mmiri nke dị n'akụkụ Osimiri Clyde. Obodo Scotland a dị na Lowlands abụghị ebe ị ga-eleta ma e jiri ya tụnyere Edinburgh, mana ọ na-ezochikwa ụfọdụ ihe na-atọ ụtọ. Site na narị afọ nke XNUMX ruo XNUMX ọ bụ obodo bara ọgaranya na ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ya mere o nwere nnukwu uto. Taa, anyị ka nwere ike ịhụ ije ụlọ Victorian na Georgian, yana mpaghara ọhụụ.
Ka anyị lee ihe bụ isi ihe na-adọrọ mmasị na obodo Glasgow, nke bụkwa ihe nleta na-adọrọ mmasị. Ọ bụ ọmarịcha nleta ma ọ bụrụ na anyị nọ na Edinburgh, ebe ọ bụ na ọ bịarute tupu elekere. Anyị ga-enwe ike ịhụ ebe akụkọ ihe mere eme ya na mpaghara ọdụ ụgbọ mmiri a rụgharịrị na-esote osimiri ahụ, na mgbakwunye na ihe ndị ọzọ.
1 Katidral St Mungo
2 Ellọ ihe nkiri Kelvingrove
3 Ogige Botanic Glasgow
4 Necropolis na Glasgow
5 Ashton na Zoro Ezo
6 Obodo Glasgow
Katidral St Mungo
Nke a Katidral bụ otu n'ime ụlọ ochie ya na ezigbo ihe nnọchianya nke ụdị Gothic na Scotland. Ọ bụ katidral nke ewuru na narị afọ nke iri na abụọ, nke arụzigharịrị na narị afọ nke XNUMX. Nwere ike ịga n'ili nke Saint Mungo onye bụ onye nchebe obodo ahụ nke dị na crypt ochie site na narị afọ XNUMXth. I nwekwara ike inwe ekele maka windo windo ndị mara mma, ọ bụ ezie na ha dị ugbu a, na ụlọ elu site na narị afọ nke XNUMX. Katidral mara ezigbo mma na otu n'ime nleta dị mkpa n'obodo Glasgow.
Ellọ ihe nkiri Kelvingrove
N'obodo a enwere ọtụtụ ebe ngosi ihe mgbe ochie, ọ bụ ezie na nke a bụ nke ị ga-ahụ ma ghara ịhapụ ma ọ bụrụ na ịnweghị oge iji hụ ha niile. Muselọ ihe ngosi nka gbara ogige mara mma ma ọ bụghị naanị na-adọta gburugburu ya, ebe ọ nwere ọtụtụ ọrụ nwere mmasị. Anyị nwere ike ịhụ n'ime ụlọ ha Boticelli's 'The Annunciation' ma ọ bụ Dalí 'Christ of Saint John of the Cross', yana ụfọdụ eserese Van Gogh ma ọ bụ Rembrandt.
Ogige Botanic Glasgow
Nke a mara mma Ogige Botanical dị na otu njedebe nke West End. Ọ bụ nnukwu ogige ọha na eze mara mma nke ukwuu n'oge ọkọchị dị ka oge opupu ihe ubi na oge mgbụsị akwụkwọ. N'ime ogige a, anyị na-ahụ Kibble Obí, nnukwu griin haus nke Victorian kwesịrị ileta. Ebe zuru oke iji were foto mara mma.
Necropolis na Glasgow
Uzo esi aga na Katidral St Mungo bụ necropolis mara mma Glasgow. Na Edinburgh ị nwekwara ike ịmasị ọmarịcha ili ozu ochie, nke nwere amara pụrụ iche. Ebe a na-eli ozu a sitere n’oge Victorian, ya mere o nwere ọtụtụ nkọwa ga-eme ka anyị ju anyị anya. Nwere ike ịgagharị na-enwe mmasị na nkọwa niile na ebe a na-eli ozu ma gbagoo na katidral iji hụ ya site n'elu.
Ashton na Zoro Ezo
Ọ bụrụ n ’ịnụ ihe ọ bụla gbasara ụzọ ndị a, ha dị warara, nke ochie na nke efere gburugburu ebe ị ga - ahụ ikuku dị mma n’obodo. Ya mere ọbịbịa ọzọ na ị ga-achọ ime na-agụnye Ashton na Zoro Ezo Lane. Ashton dị na mpaghara mahadum ma anyị nwere ike ịchọta ụlọ mmanya na ụlọ nri ndị nwere ezigbo ikuku ebe ị ga-akwụsị. Zoro ezo dị jụụ, yana ụlọ ahịa na ụfọdụ ụlọ ahịa ebe ị ga-azụta ihe na-atọ ụtọ.
N’etiti obodo anyị nwere ike ịhụ ụfọdụ ebe na-atọ ụtọ, ebe ọ bụ obodo ebe anyị na-ahụ nka na ọmarịcha mma. George Square bụ ebe dị egwu na ncheta agha. Na Buchanan Street anyị na-ahụ okporo ụzọ azụmahịa site na obodo, nwere ufodu uzo di nma ma obu uzo na ihe ngosi nka. Anyị nwekwara ike ịga na The Lighthouse, bụ ụlọ pụrụ iche na Mackintosh nke bụ isi ụlọ ọrụ nke akwụkwọ akụkọ mana ugbu a ọ bụ ụlọ ngosi ihe nka nwere nnabata n'efu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » si ebi ndụ » Ihe ị ga-ahụ na Glasgow
Foto agbamakwụkwọ, olee otu esi adị mma mgbe niile?
Kedu ihe bụ fenugreek na gịnị ka eji ya?